MacOS Sierra 10.12.6 yave kuwanikwa kune vese vashandisi | Ndinobva mac
Iyi Chitatu masikati yakasarudzwa nevakomana kubva kuCupertino kuti vanyatso kumisikidza vhezheni dzekupedzisira dze macOS Sierra 10.12.6, iOS, watchOS, uye tvOS. Mune ino kesi, chinotinakidza ikozvino ndiyo vhezheni yevashandisi veMac uye kunyangwe chiri chokwadi kuti mushanduro idzi hapana shanduko dzakawandisa kana zvichienzaniswa neshanduro yapfuura, zvakakosha kuti dzigadziridzwe kudzivirira matambudziko ekurwiswa bato rechitatu, kugadzirisa kugadzikana kwemidziyo uye nezvimwe.
Ino nguva isu takatarisana neshanduro inotangira macOS High Sierra Uye kunyange chiri chokwadi kuti Apple inogona kuburitsa vhezheni pakati pekupedzisira 10.12.6 uye yekutanga yeMacOS High Sierra, shanduko dzinenge dziri shoma.
Iyo itsva vhezheni inowedzera iyo gadziriso, kugadzikana kwesystem uye kugadzirisa matambudziko inowanikwa mushanduro dzakapfuura. Usazeze kuisa ino nyowani patsva nekukurumidza sezvaunogona nekuti nenzira iyi isu tinotora mukana wekuvandudza kunoitwa. Sezvo isu tichiti hapana shanduko padanho rekushanda kana nhau dzakasarudzika, asi zvinogara zvichikosha kwazvo kuchengetedza iyo Mac kuvandudzwa. Parizvino Apple ine mikana yakati wandei yakavhurwa mune akasiyana masisitimu anoshanda uye pasina kupokana iyo iri kugashira kutarisisa gore rino iOS yeiyo iPad, sezvo akawanda matsva akaisa pfungwa pachinhu ichi kubva kukambani yeCupertino.
Kuti tivandudze Mac yedu isu tinongofanira kuenda Mac App Store uye tinya pane iyo tebhu Zveshuwa, ipapo vhezheni itsva yatinofanira kurodha pasi nekumisikidza ichaonekwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » MacOS Sierra 10.12.6 yave kuwanikwa kune vese vashandisi
Jose Perez akadaro
Ndine macbook Pro ine sierra 10.12.5, asi kana ndichiedza kugadzirisa kusvika 10.12.6 komputa inotonhora neapuro uye ndinofanira kudhonza backup kuti nditange futi
Pindura José Pérez
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, mumwe munhu anogona kutibatsira nazvo?
Mhoroi vanhu vese!. Ndiri kutsamwa. Handisati ndamboita dambudziko neTime Machine, asi kusvetuka kubva kuMacOS Sierra kubva pa10.12.5 kusvika pa10.12.6 hakuiti yangu Mac backup. Inoenderera nekusingaperi uye ipapo "Nguva Machine haina kukwanisa kuzadza backup" meseji. Pane mumwe munhu akacherekedza here? Ndingafarire kwazvo mazwi ako.
Chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri pa2 MacBook Pro imwe kubva muna2016 uye imwe kubva muna2012. Asi kunyange nemuchina wenguva ndakauwana. Imwe yandaifanirwa kuita yakachena yekumisikidza uye yechinyakare haina kana kundibvumidza kuti ndiratidze rakaomarara dhisiki. Iyi yekuvandudza yakaipa kupfuura hutachiona. Izvi zvinotaridzika zvakanyanya seWindows.
Zvinoitika zvakafanana kwandiri. Mushure mekubudirira kupora (ini handizive kuti ndazviita sei nekupererwa) ndinoisiya ndisina kuvandudza kusvika 12.13
Iyo dhiriini kuGenius Bar yenyadzi. Senge ndanga ndichigadzira dambudziko. Chokwadi izvi zvinogona kutakura mucherechedzo.
Esteban M. akadaro
Ndine dambudziko rakafanana, handikwanise kutanga komputa yangu ... inonamira paBlack SCREEN NEAPLELE UYE KUTENGA BHA, iyi nyowani nyowani yashanduka kuita njodzi chaiyo !!!! Handizive zvekuita…
Pindura Esteban M.
Mhoroi, masikati machena, ndine Macbook Air (2015), ndakaita iyo yekuvandudza kuenda ku10.12.6 uye ini ndakatanga kuve nematambudziko nebhatiri rinondinyudza nekukurumidza zvakanyanya kana risina basa.
Zvimwe zvakafanana zvakaitika kwaari.
Chinhu chaichoicho chakaitika kwandiri uye ndaifanira kuchidzorera ne backup yeangu timemachine
Ndine mhepo 2011 uye ndiri kuita zvakanaka ne10.12.6 ... yangu yekutenda uye chiuru zvakapetwa nekukurumidza kupfuura yangu pc 2017 mutambo
Pindura kuna jcc
UPSS, ini ndakagadzirisa uye kusvika zvino pasina matambudziko.
Mhoroi, ndine macbook mhepo kubva 2015 uye pandakaita iyo yekuvandudza odhiyo yakamira kushanda. Handizive kuti ndozvigadzirisa sei.
Pindura kuna Facundo
Anodiwa, ndine dambudziko diki ... rinenge risingabatike;
Zvinoitika kuti kana uchitsvaga mafaera kubva kuPhotohop CC uye uchifamba-famba muhwindo re pop-up, ndinonzwa senge yangu sarori "yakanamirwa" mufaira. Ini ndinofanira kusarudza nzvimbo isina chinhu yefaira kuti ndikwanise kuridonhedza, uye nekudaro sarudza imwe faira yandinoda kuona kuti ndiifambise. (ndisina kuvhura izvozvi). chimwe chinhu chisina kuitika kwandiri neshanduro dzekare dzeMac Os Sierra.
Yangu yazvino vhezheni ndeye 10.12.6 pane MacBook pro Late 2012.
Ndinovimba munogona kundinzwisisa uye kundibatsira… ndinokutendai pamberi!
harold torres akadaro
Chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri, ini ndinogadziridza kune yazvino vhezheni ye macOS Sierra uye pc inopunzika ine yekukwirisa bhaa pasina kuenda kumberi. Ini ndaifanirwa kudzoreredza pc ine nguva muchina
Pindura kuna harold torres
Xavi G akadaro
Iri idambe, mushure mekupedza mazuva uchindibvunza kuti ndiwedzere kune iyo nyowani vhezheni, iyo system haina kutanga. Ini ndinoshevedza apple kuti undizivise matanho anotevera ekuti undiudze kuti yangu MBP i7 kubva muna 2012 yachembera uye haisisina hunyanzvi sevhisi, kuti ini handiise iyi yekuvandudza. Mhinduro inoshamisa. Mukupedzisira ndaifanira kudhonza Time Machine kuti ndiidzorere nekuti kana kumisazve PRAM, kudzima .kext mafaera kubva kune terminal kana chero chinhu zvachose. Nguva dzese pavanoshungurudza zvimwe
Pindura kuna Xavi G
Isabel Ge Mahe anova mukuru weChina kuApple